Steve Jobs: Diirada, Aragtida, Naqshadeynta | Martech Zone
Steve Jobs: Diirada, Aragtida, Naqshadeynta
Axad, Disembar 18, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maalintii jimcaha 'Podcast' waxaan ka wada hadalnay buugaagta ugu wanaagsan ee aan aqrin lahayn sannadkan, illaa iyo hadda, ka aan ugu jeclahay wuxuu ahaa Steve Jobs. Waxbadan ma akhrinin baryahan - Aad ayaan ugu mahad naqayaa Jenn buugga ii iibso!
Buuggu maahan mid jacayl u jecel Shaqooyinka. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa inay bixinayso sawir isku dheelitiran halka ay hoos u dhac ku timid shaqooyinku ay ahaayeen arrimo uu ku xakameynayay. Waxaan leeyahay daacish maxaa yeelay saameynta ay ku yeelatay caafimaadkiisa, qoyskiisa, saaxiibbadiis, shaqaalihiisa iyo ganacsigiisa. Dadka intiisa badani waxay ku eegaan Apple baqdin… inay tahay mid ka mid ah shirkadaha ugu qiimaha badan meeraha. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray hoos u dhac… Apple mar ayaa xukuntay inuu noqdo hogaamiyaha warshadaha PC ka dibna lumiyay cagihiisa.
Kufilan taban… Shaqooyinka runtii waxay ahaayeen bini aadam gaar ah. Ujeedkiisa leysarka iyo aragtidiisa, oo ay weheliso dhadhankiisa aan la isku halleyn karin ee naqshadeynta ayaa runtii ka dhigtay shirkaddiisa mid gaar ah. Shaqooyinku waxay beddeleen warshadaha kombuyuutarka desktop-ka, warshadaha daabacaadda desktop-ka, warshadaha muusikada, warshadaha filimada ee firfircoon, warshadaha taleefannada iyo hadda warshadaha kiniinka. Kaliya maahan naqshadeynta, wuxuu dhab ahaantii beddelay sida ganacsiyadaas ay dhab ahaan u shaqeynayeen.
Anigu waxaan ka mid ahaa dadka wax naqdiya markii Apple ay tidhi waan furayaa dukaamada tafaariiqda. Waxaan u maleeyay inay tahay nuts… gaar ahaan maadaama Gateway uu tooda toosayo. Laakiin waxa aanan fahmin in dukaamada tafaariiqdu ayan ahayn iibinta wax soo saarka, ee waxay ku saabsanaayeen soo bandhigida badeecada sida ay Shaqooyinku u rabeen in loo soo bandhigo. Haddii aadan tagin dukaanka Apple, runti waa inaad iska hubisaa. Xitaa haddii aad booqato iibsiga ugu Fiican, waxaad arki doontaa sida Apple loogu soo bandhigo si ka duwan.
Walter Isaacson waa sheekeeye sheeko layaableh waxaana ku dhegay buugga isla markii aan furay. Waxaa jiray caricature ka mid ah Shaqooyinka aan wada aragnay, laakiin buuggu wuxuu lahaa faahfaahin aad u badan oo la yaab leh iyada oo loo marayo wareysiyo lala yeeshay dadkii isla qolka ku sugnaa. Ma aha in buuggu uusan cillad lahayn, in kastoo. Forbes ayaa dhawaan puublished mid aad uga duwan sheeko ku saabsan ololaha fikirka kala duwan.
Shakhsiyan, farriinta aan uga fogaaday buugga ayaa ah in guusha ay jirto in la helo marka aad si hagar la’aan ah u sii wadatid hiigsigaaga. Waxaan dareemayaa in ganacsigeennu kaliya u guuleysto sida aan ugu heellan nahay inaan adeegyo waaweyn u gaarsiinno macaamiisheenna. Kaliya ma hubo inaan diyaar u ahay inaan u huro sida ugu badan ee Shaqooyinka u gaadhay halkaas. Macno ahaan, waxaa laga yaabaa inuu ku guuleystay dagaalo badan, laakiin ma hubo inuu ku guuleystay dagaalka.
Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo fikradahaaga ku saabsan buugga!
Tags: shaqooyinka steve